ANTANANARIVO RENIVOHITRA: HAPETRAKA NY » CAMERAS » HANARAHA-MASO NY TANANA
On fév 6, 2020 8 458
Efa tafapetraka ankehitriny, ireo « Cameras » Fanaraha-maso, napetraka eto Antananarivo Renivohitra. Izany no natao, taorian’ny fitsidihana ny tohatoha-baton’Antaninarenina sy Ambondrona nataon’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry, ny alahady lasa teo. Eny amin’ny toeram-piasan’ny Office de Transmission Militaire d’Etat na ny OTME, eny Andohalo, no misy ny fikirakirana izany.
Manoloana izay indrindra, nisy ny fijerena ifotony izany, nataon’ny ben’ny tananan’Antananarivo Renivohitra teny an-toerana. Tsy nitazam-potsiny ny fizotry ny asa anefa izy fa nitondra, fanampiana ara-pitaovana (caméra de surveillance) ihany koa. Ankoatra izay, nizara toromarika tamin’ny mpiasan’ny OTME sy kaominina, Atoa Andriantsitohaina Naina. Ny alatsinainy ho avy izao no hametrahana ny fitaovana eny amin’ny toerana, izay heverina fa hanjakan’ny tsy fandriampahalemana.
» Manampy betsaka ny mpitandro filaminana sy fitandrovana ny fandrimpahalemana ny fisian’ny ireo camera fanaraha-maso ireto« , ny kolonely Rafaliarison fidimalala Norbert, Tale Jeneraly ny OTME, nanazava. » Azon’ny olon-drehetra hatao ny mangataka ny tahirin-tsary na ny horonantsary raha ilaina izany. Saingy tsy mangataka mivantana kosa anefa, tsy maintsy ampandalovina amin’ny polisy na zandary ny taratasy », hoy izy namarana ny resaka.
TETIKASA « BAS MANGOKY »: MANOHANA NY MPANATANTERAKA NY SOLOMBAVAMBAHOAKA ENY TSIMBAZAZA
BNGRC: NITONDRA FANAMPIANA HO AN’NY TRABOINA NY ORINASA HITA AVY ANY TOAMASINA